1 thought on “New Oromo Musics”
Ittiqaa Teferii fi Hawwi Tezera, hedduu galatoomaa. ” Qabsawaan ni kufaa, qabsoon ittifufa ” akkuma jedhame, qabsoon Oromoo hanga galma ga’utti hin dhaabbatu. Diinni karaa adda addaa shira adda addaa itti dhimma ba’ee qabsoo haqaa gufachiisuuf gadi taa’ee hin beeku. Kanaafuu nuti Oromootis tokkuummaadhaan halkan fi guyyaa cininnanee shira diinaa fashaleesuuf carraaquu qabna.
Sodaan diinaa inni guddaan tokko TOKKOOMUU OROMOO fi SABOOTA BIROON waliigaluu Oromooti. Kanaafuu, kana irrati jabaannee haa hojjeenu malee,
” Tokko ajjeesii dhibba sodaachisi,
Dhibba ajjeesii kuma sodaachisi,
Kuma ajjeesii milliyoona sodaachisi ”
kan jedhu toftaan diinaa uummata Oromoo booda hin deebisu hinumayyuu ni cimsa malee. Meeshaa cimaan amma kan Oromoo barbaachisu, ofii keenyaaf harka wal qabannee, uummatoota biyyaa sana keessaa akka keenya cunqurfamaniin waliigaluudha.